စိတ်ကူးပျော်ရာ: အလုပ်မှာ ကိုယ့်ကိုပိုအသိအမှတ်ပြုကြအောင် ဘယ်လိုနေမလဲ ???
အလုပ်မှာ ကိုယ့်ကိုပိုအသိအမှတ်ပြုကြအောင် ဘယ်လိုနေမလဲ ???
အလုပ်ဝင်နေသူ လူတော်တော်များများဆီကကြားနေရတာက "ငါလုပ်သမျှ ငါစွမ်းဆောင်သမျှတွေကို ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ငါ့မန်နေဂျာနဲ. ငါ့အထက်အရာရှိတွေက သဘောမကျ အသိအမှတ်မပြုကြဘူး" ဆိုတဲ့စကားပါပဲ။ ကိုယ်ပေးတဲ့အကြံဥာဏ်တွေ ကိုယ်ပေးတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကို အရေးမလုပ်အသုံးမပြုဘဲထားတယ်လို.လဲ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်ကအချက်လေးတွေကတော့ အလုပ်ထဲမှာသင့်ကို အသိအမှတ်ပြုလာအောင်ကူညီနိုင်လို. လေ့လာထားသင့်တယ်လို. ထင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး သင်အခုလိုခံစားနေရတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲလို.မေးပါ။
" ငါ့ကိုဂရုမစိုက်၊ အသိအမှတ်မပြုကြဘူး " လို.အတွေးဝင်လာရင် အဲ့အတွေးကိုရပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးပါ။ ငါဒီလိုမျိုးဘယ်အချိန်ကတည်းကစခံစားရတာလဲ ? သင့်ရဲ.စိတ်ကိုသေချာပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်ပြီး ငါဒီလိုခံစားရတာဘယ်အချိန်မှာပထမဦးဆုံးဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတာကို သိအောင်လုပ်ပါ။ သေချာတာကတော့အဲ့လိုခံစားချက်မျိုးက ကလေးဘ၀တည်းကိုကစခံစားရတတ်တာပါ။ ကလေးဘ၀တည်းက ကိုယ်ပြောတာကိုယ်လုပ်တာကို မိဘဆွေမျိုးသားချင်း ဒါမှမဟုတ် ဆရာဆရာမက အရေးမစိုက်၊ အဖတ်မလုပ်တာမျိုးကိုကြုံဖူး ခံစားရဖူးကြပါတယ်။ တခါတလေမှာကိုယ့်ကို " အသုံးမကျဘူး " " အဖြစ်မရှိဘူး " စသဖြင့်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုတွေ ခံစားချက်တွေ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးကုန်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ Lily ဟာရှေ.နေတစ်ယောက်အရမ်းဖြစ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၁၂နှစ်အရွယ်မှာသူမရဲ.စိတ်ကူးဝါသနာကို မိဘတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာ မိဘတွေကပျက်ရယ်ပြုပြီး သူမရဲ.စိတ်ကူးကိုပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နောက်ပိုင်းအသက်ရလာလို.အလုပ်ဝင်တော့ အလုပ်တိုင်းမှာ သူမတော်တော်ကိုအခက်ကြုံကြိုးစားရပါတယ်။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ သူမဟာသူမစိတ်ကူးယုံကြည်ခဲ့တဲ့အရာကို အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်မရခဲ့ဘဲနဲ. သူမတစ်ခုခုစဉ်းစားအကြံရလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာ ဖြစ်ရောဖြစ်နိုင်ပါ့မလား မှန်ရောမှန်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်က အမြဲလိုဝင်ရောက်နေတော့တာပါ။ ငယ်ဘ၀မှာကိုယ်အဓိကထားစိတ်ကူးမိတဲ့အကြံဥာဏ်ကို မှားတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို. ပြောဆိုပယ်ချပြီး ဖျက်စီးခံလိုက်ရတဲ့နောက်မှာလည်း တစ်ခုခုဆိုငါပြောတာကိုဂရုမစိုက်ဘူး၊ အသိအမှတ်မပြုဘူးဆိုတဲ့အတွေးက အလွယ်တကူဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်။
ဒီအချက်အတွက်အဓိကလုပ်ဆောင်ရမှာကတော့ အရင်ဆုံး သင့်အတွင်းစိတ်ကိုပြုပြင်ကုသရမှာပါ။ ဒီတပတ်ကစပြီး ကိုယ်အဲ့လိုခံစားလာရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ဂျာနယ်ဖြစ်ဖြစ်၊ မဂ္ဂဇင်းဖြစ်ဖြစ် ဖတ်တာမျိုးစလုပ်ပါ။ ကလေးဘ၀မှာကိုယ့်ကိုအသိအမှတ်မပြု ဂရုမစိုက်ဘဲထားတာကဘယ်သူ.မှာတာဝန်ရှိလဲ ? သူတို.တွေသင့်ကိုဂရုမစိုက် အသိအမှတ်မပြုတာက ဘာကြောင့်လဲ ? သူတို.သာသူတို.လူငယ်ဘ၀မှာ ကိုယ့်ကိုလုပ်သလိုမျိုးအလုပ်ခံရရင် ဘယ်လိုခံစားဖြတ်သန်းမလဲ ? စသဖြင့် တွေးမိတတ်တာတွေကိုတွေးရုံတင် မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်လေးစားအားကိုးရတဲ့ အတိုင်ပင်ခံတစ်ယောက်ယောက်ကို ရင်ဖွင့်ပြီးအကုန်အစင်ပြောကြားလိုက်ပါ။ သင့်ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟတာဟာ အကောင်းဆုံးစိတ်ကုသနည်းတစ်ခုပါပဲ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/02/2015 09:11:00 AM